Miverina ny hetsika fitandroana fahalemana antsoina hoe : « Papango ». Efa nisy teo aloha ilay antsoina hoe «Dispositif papango» ary hamafisina izany amin’izao, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (SEG). « Aseho ny Vahoaka fa tokony hatoky ny mpitandro filaminana izy ary atao tsapan'ireo jiolahy ihany koa fa manao ny asany ny mpitandro filaminana ».
Nanome toromarika koa ny SEG fa « hohamafisina ny fisavàna ny moto sy ny fiara amin’ny alina, ary tokony hanaiky ny fandaminana ny olona satria matetika dia moto no entin’ireo mpanao fanafihana manao ny asa ratsiny. Tokony hatoky ny olona fa manao ny asany ara-dalana ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao ».
Nidina ifotony nijery sy nanao fanaraha-maso ireo mpitandro filaminana manatanteraka ity hetsika "Papango" ity ny Minisitry ny filaminam-bahoaka, Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys, sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, jeneraly Ravalomanana Richard, ny alin'ny 12 febroary 2020.
Niainga teo Anosy niazo an’Anosizato ary hatreny Ampasampito ny fisafoana, izay natao niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny fari-piadidiana Zandary, Tafika ary Polisy.
Nanome fampaherezana sy fampirisihana an'ireo manatanteraka ny asa eny an-tsehatra, ny Minisitry ny filaminam-bahoaka ary nanantitra ny tokony hisian'ny firaisankina hatrany eo amin’ny telo tonta amin’ny fametrahana fandriam-pahalemana eto Antananarivo sy manerana ny nosy.